iPhone Battery ကို စနစ်ကျကျ ဘယ်လို အားသွင်းအသုံးပြုမလဲ
24 Aug 2018 . 4:13 PM
အရင်တစ်ခါတုန်းက စမတ်ဖုန်း ဘက်ထရီ ဘယ်လိုအားသွင်းရမလဲဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တင်ပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတခါမှာ iPhone Battery ဘယ်လို စနစ်ကျကျ အသုံးပြုမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
အသုံးမလိုတဲ့ App ကို ပိတ်လိုက်တာက Battery ပိုမခံပါဘူး
တစ်ခါတလေ အသုံးပြုပြီးသား App တွေကို Home Button နှစ်ချက်နှိပ် ပိတ်ထားလိုက်တာက Battery သက်တမ်း ပိုမတိုးလာဘူးလို့ Apple ဆိုထားပါတယ်။ နောက်ပြီး သုံးနေရင်း App Freeze ဖြစ်သွားလို့ Setting ထဲမှာ Disabled လုပ်ထားမိရင်လည်း ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ Battery အားပိုကုန်ပါတယ်။ ဒါက Apple ကိုယ်တိုင် ပြောထားတဲ့အချက်ပါ၊ သူ့ဆိုလိုရင်းက Disabled လုပ်ထားတဲ့ App ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ RAM ပေါ်တင်ဖို့ CPU Power ပိုသုံးရသလို Battery အား ပိုကုန်တာမလို့ မလိုအပ်ဘဲ Disabled မလုပ်ထားဖို့ Apple တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
Set Background App Refresh Correctly
Background App Refresh ထဲမှာ အသုံးမလိုတဲ့ App တွေ ဖယ်ရှားပေးထားပါ
ဒီ Setting က Wi-Fi ဒါမှမဟုတ် Cellular Network တခုခုနဲ့ App Content အသစ် Refresh လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အချက်ပါ။ ဒီ Setting ထဲက မလိုအပ်တဲ့ App တွေ ဖယ်ရှားပေးလိုက်တာက အင်တာနက် သုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်သလို ဘက်ထရီသုံးတာကိုလည်း ခြွေတာနိုင်မယ့် အချက်ပါ။
Charge your phone overnight?
တစ်ညလုံး အားသွင်းတာမျိုးက Battery ကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား
Apple Battery တွေက Cycle Count နဲ့ သွားတာမလို့ သူ့သက်တမ်းအလိုက် ဘယ်နှစ်ခါ အားအသွင်းခံမလဲ ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပဲ စကားပြောမှာပါ။ ဒါကြောင့်မလို့ ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းတွေမှာတောင် ဒီလိုမျိုး Advanced Power Management နည်းပညာသုံးလာပြီး အား ၁၀၀ အပြည့်သွင်းထားလို့ ပလပ်ဖြုတ်မထားမိရင်လဲ ဘက်ထရီ ထိခိုက်မှု မရှိပါဘူး။ ဒါမယ့် ဘက်ထရီ အားလုံးက သူ့သက်တမ်းနဲ့သူ လာတာမလို့ အားလဲမခံ၊ စွမ်းဆောင်ရည်လည်း ကျလာခဲ့ရင် ဘက်ထရီ အသစ်အစားထိုးဖို့ Apple တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
Replace battery accordingly
Apple အသိမှတ်ပြု Battery တွေပဲ အသုံးပြုပါ
ဒီအချက်က ဟိုးလောတကျော်ကျော်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ iPhone မော်ဒယ်တချို့ နှေးကွေးလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Processor Power ကို Apple လျှော့ချထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဒီကိစ္စကို Software Update နဲ့ ဖြေရှင်းပေးခဲ့သလို Apple Store တွေမှာ Battery အစားထိုးပေးခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး အရည်သွေး မကောင်းတဲ့ Apple Battery ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာပါ။ ဒီအတွက် Apple Store တွေမှာ ရောင်းချပေးနေတဲ့ ဒေါ်လာ ၃၀ တန် iPhone Battery တွေကတော့ အာမခံ အပြည့်ရှိတယ်လို့ Apple ပြောထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖုန်းဘက်ထရီ အသစ်လဲဖို့ လိုမလို Apple Store တွေမှာ ဆန်းစစ်နိုင်သလို Battery သိုလှောင်အား 80% အောက် ရောက်နေပြီဆိုရင် လဲလှယ်ဖို့ အချိန်ကျနေပြီလို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
They must always be connected
Wi-Fi နဲ့ Bluetooth ကို မလိုအပ်ရင် ပိတ်ပေးထားပါ
ဒါကတော့ Apple မှ မဟုတ် Android ဖုန်းတွေမှာလည်း Wi-Fi နဲ့ Bluetooth မလိုအပ်ဘဲ ပိတ်ထားလိုက်တာက Battery အားပိုခံပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖွင့်မိထားရင်တောင် အားမကုန်ပေမယ့် Apple Watch နဲ့ တွဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ Bluetooth Connection အမြဲလိုလို ဖွင့်ပေးထားရမှာပါ။ Apple Watch ကလည်း Bluetooth ချိတ်မထားရင် အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ အနည်းနဲ့အများ ဖုန်းဘက်ထရီ ပိုကုန်မှာပါ။ နောက်တချက်က Mobile Connection မကောင်းရင် Airplane Mode ဖွင့်ထားလိုက်တာက ဘက်ထရီအားခြွေတာရာ ရောက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Wi-Fi ထက် Celleluar Network က ဘက်ထရီပို အစားနည်းတာမလို့ အမြဲလိုလို Wi-Fi ဖွင့်ထားဖို့ Apple အကြံပြုထားပါတယ်။
Using under direct sunlight can decrease battery life
Auto Brightness Setting သုံးတာက အားပိုခံပါတယ်
ဖုန်း Brightness နည်းနည်းနဲ့ သုံးတာက အားပိုခံပေမယ့် အလင်းထဲရောက်သွားလို့ Brightness တင်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ မထင်မှတ်ထားဘဲ ဘက်ထရီ အားပိုစားနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ အားအကုန်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် Control Center ထဲမှာ Auto Brightness ဖွင့်ပေးထားလိုက်တာက ပိုကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ Apple ပြောထားပါတယ်။ နိဂုံးအနေနဲ့ကတော့ iOS အသစ်ထွက်တိုင်း Update လုပ်ပေးပါ။ ဒီအချက်က ဘက်ထရီ သက်တမ်း ကြာကြာပိုခံမယ့် လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်လို့ Software တွေနဲ့ iOS ကို အမြဲ Update လုပ်ပေးပါလို့ Apple တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
iPhone Battery ကို စနဈကကြ ဘယျလို အားသှငျးအသုံးပွုမလဲ
အရငျတဈခါတုနျးက စမတျဖုနျး ဘကျထရီ ဘယျလိုအားသှငျးရမလဲဆိုတဲ့ အခကျြနဲ့ ပတျသကျလို့ တငျပွခဲ့ပွီးပွီဆိုတော့ ဒီတခါမှာ iPhone Battery ဘယျလို စနဈကကြ အသုံးပွုမလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးသှားပါ့မယျ။
အသုံးမလိုတဲ့ App ကို ပိတျလိုကျတာက Battery ပိုမခံပါဘူး
တဈခါတလေ အသုံးပွုပွီးသား App တှကေို Home Button နှဈခကျြနှိပျ ပိတျထားလိုကျတာက Battery သကျတမျး ပိုမတိုးလာဘူးလို့ Apple ဆိုထားပါတယျ။ နောကျပွီး သုံးနရေငျး App Freeze ဖွဈသှားလို့ Setting ထဲမှာ Disabled လုပျထားမိရငျလညျး ပွနျဖှငျ့တဲ့အခါ Battery အားပိုကုနျပါတယျ။ ဒါက Apple ကိုယျတိုငျ ပွောထားတဲ့အခကျြပါ၊ သူ့ဆိုလိုရငျးက Disabled လုပျထားတဲ့ App ပွနျဖှငျ့တဲ့အခါ RAM ပျေါတငျဖို့ CPU Power ပိုသုံးရသလို Battery အား ပိုကုနျတာမလို့ မလိုအပျဘဲ Disabled မလုပျထားဖို့ Apple တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
Background App Refresh ထဲမှာ အသုံးမလိုတဲ့ App တှေ ဖယျရှားပေးထားပါ
ဒီ Setting က Wi-Fi ဒါမှမဟုတျ Cellular Network တခုခုနဲ့ App Content အသဈ Refresh လုပျဖို့ ရှေးခယျြနိုငျတဲ့ အခကျြပါ။ ဒီ Setting ထဲက မလိုအပျတဲ့ App တှေ ဖယျရှားပေးလိုကျတာက အငျတာနကျ သုံးစှဲမှုလြှော့ခနြိုငျသလို ဘကျထရီသုံးတာကိုလညျး ခွှတောနိုငျမယျ့ အခကျြပါ။
တဈညလုံး အားသှငျးတာမြိုးက Battery ကို ထိခိုကျစနေိုငျသလား
Apple Battery တှကေ Cycle Count နဲ့ သှားတာမလို့ သူ့သကျတမျးအလိုကျ ဘယျနှဈခါ အားအသှငျးခံမလဲ ဆိုတဲ့အခကျြနဲ့ပဲ စကားပွောမှာပါ။ ဒါကွောငျ့မလို့ ခတျေပျေါ စမတျဖုနျးတှမှောတောငျ ဒီလိုမြိုး Advanced Power Management နညျးပညာသုံးလာပွီး အား ၁၀၀ အပွညျ့သှငျးထားလို့ ပလပျဖွုတျမထားမိရငျလဲ ဘကျထရီ ထိခိုကျမှု မရှိပါဘူး။ ဒါမယျ့ ဘကျထရီ အားလုံးက သူ့သကျတမျးနဲ့သူ လာတာမလို့ အားလဲမခံ၊ စှမျးဆောငျရညျလညျး ကလြာခဲ့ရငျ ဘကျထရီ အသဈအစားထိုးဖို့ Apple တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
Apple အသိမှတျပွု Battery တှပေဲ အသုံးပွုပါ
ဒီအခကျြက ဟိုးလောတကြျောကြျောဖွဈသှားခဲ့တဲ့ iPhone မျောဒယျတခြို့ နှေးကှေးလာတာနဲ့ ပတျသကျပွီး Processor Power ကို Apple လြှော့ခထြားခဲ့တယျဆိုတဲ့ ပွဿနာပါ။ ဒီကိစ်စကို Software Update နဲ့ ဖွရှေငျးပေးခဲ့သလို Apple Store တှမှော Battery အစားထိုးပေးခဲ့တဲ့ အခြိနျကစပွီး အရညျသှေး မကောငျးတဲ့ Apple Battery ပျေါပေါကျလာတဲ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာပါ။ ဒီအတှကျ Apple Store တှမှော ရောငျးခပြေးနတေဲ့ ဒျေါလာ ၃၀ တနျ iPhone Battery တှကေတော့ အာမခံ အပွညျ့ရှိတယျလို့ Apple ပွောထားပါတယျ။ နောကျပွီး ဖုနျးဘကျထရီ အသဈလဲဖို့ လိုမလို Apple Store တှမှော ဆနျးစဈနိုငျသလို Battery သိုလှောငျအား 80% အောကျ ရောကျနပွေီဆိုရငျ လဲလှယျဖို့ အခြိနျကနြပွေီလို့ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
Wi-Fi နဲ့ Bluetooth ကို မလိုအပျရငျ ပိတျပေးထားပါ
ဒါကတော့ Apple မှ မဟုတျ Android ဖုနျးတှမှောလညျး Wi-Fi နဲ့ Bluetooth မလိုအပျဘဲ ပိတျထားလိုကျတာက Battery အားပိုခံပါတယျ။ တကယျလို့ ဖှငျ့မိထားရငျတောငျ အားမကုနျပမေယျ့ Apple Watch နဲ့ တှဲသုံးနတေယျဆိုရငျတော့ Bluetooth Connection အမွဲလိုလို ဖှငျ့ပေးထားရမှာပါ။ Apple Watch ကလညျး Bluetooth ခြိတျမထားရငျ အလုပျမလုပျဘူးဆိုတော့ အနညျးနဲ့အမြား ဖုနျးဘကျထရီ ပိုကုနျမှာပါ။ နောကျတခကျြက Mobile Connection မကောငျးရငျ Airplane Mode ဖှငျ့ထားလိုကျတာက ဘကျထရီအားခွှတောရာ ရောကျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ Wi-Fi ထကျ Celleluar Network က ဘကျထရီပို အစားနညျးတာမလို့ အမွဲလိုလို Wi-Fi ဖှငျ့ထားဖို့ Apple အကွံပွုထားပါတယျ။
Auto Brightness Setting သုံးတာက အားပိုခံပါတယျ
ဖုနျး Brightness နညျးနညျးနဲ့ သုံးတာက အားပိုခံပမေယျ့ အလငျးထဲရောကျသှားလို့ Brightness တငျလိုကျတဲ့အခါမြိုးမှာ မထငျမှတျထားဘဲ ဘကျထရီ အားပိုစားနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မလို့ အားအကုနျမခံနိုငျဘူးဆိုရငျ Control Center ထဲမှာ Auto Brightness ဖှငျ့ပေးထားလိုကျတာက ပိုကောငျးတဲ့အခကျြဖွဈတယျလို့ Apple ပွောထားပါတယျ။ နိဂုံးအနနေဲ့ကတော့ iOS အသဈထှကျတိုငျး Update လုပျပေးပါ။ ဒီအခကျြက ဘကျထရီ သကျတမျး ကွာကွာပိုခံမယျ့ လိုအပျခကျြတခုဖွဈလို့ Software တှနေဲ့ iOS ကို အမွဲ Update လုပျပေးပါလို့ Apple တိုကျတှနျးထားပါတယျ။